Artistkhabar | Home
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । आगामी भदौ १० गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको नयाँ नेपाली चलचित्र ‘द सिक्रेट अफ
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । तेश्रो संस्करणको नेपाल म्युजिक एण्ड फेशन अवार्ड २०२२ शुक्रबार बेलुका काठमाडौंमा सम्
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । दयाराम दाहालको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि
Artist Khabar Special
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । दुई दशक भन्दा लामो इतिहास बोकेको चलचित्र पत्रकारहरुको छाता संस्था चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले आफ्नो २३औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ । सोही अवसरमा संघले तीन वर्षको सम्मान तथा पुरस्कार एकसाथ वितरण गरेको छ । शनिवार नक्सालस्थित लिसरा रिसेप्सनमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले १६ जना चलचित्र पत्रकारलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्नुभयो । समारोहमा ‘राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता सम्मान २०७७’बाट शान्तिप्रिय र राजन घिम....
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । नेपाली म्युजीक भिडियो तथा चलचित्रमा अभिनयसँगै निर्देशन गर्दै आएका निरेन श्रेष्ठले तेश्रो नेपाल म्युजिक एण्ड फेसन अवार्ड मार्फत सर्वोत्कृष्ट निर्देशक बिधाको अवार्ड पाएका छन् । निरेनले शनिबार सम्पन्न समारोहका बिच अवार्ड हात पारेका हुन् । उनले बरको हाँगो बोलको गीतबाट अवार्ड पाएका हुन् । निरेनले दर्जनौं गीतहरुका भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् भने सयौं गितहरुको म्युजिक भिडियोमा निर्देशन पनि गरिसकेका छन् । निरेन रोयल मुभिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन् । अवार्ड.....
आर्टिष्ट खबर/ जेठ, काठमाडौं । नयाँ वेब सिरिज निर्माणका लागी नायिका प्रियंका कार्की र सरिता गिरीले सहकार्य गर्ने हुनुभएको छ ।
आर्टिष्ट खबर/ जेठ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा ‘नाइटी इन्फिनिटी’ नाममा कन्सर्ट हुने भएको छ । नेपाली टचले एक्सपर्ट एजुकेसनको
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । आगामी भदौ १० गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको नयाँ नेपाली चलचित्र ‘द सिक्रेट अफ राधा’को २ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सुवर्ण थापा निर्देशित चलचित्रको सार्वजनिक २ पोस्टरमा सम्पुर्ण कलाकारलाई स्थान दिइएको छ । चलचित्रको रिलिज नजिकिएसँगै चलचित्रमा अभिनित सम्पुर्ण कलाकारलाई समावेश गरेर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको निर्देशक थापाले बताउनु भएको छ । चलचित्र मा सृष्टिका अलावा सौगात मल्ल, खगेन्द्र लामिछाने, मेनुका प्रधान, पशुपति राई, दिव्य देव पन्त, राजन खतिव....
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । दयाराम दाहालको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवदेन माग
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । नयाँ नेपाली चलचित्र ‘झिँगेदाउ’को २ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । पोष्टर सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ
आर्टिष्ट खबर/ जेठ, काठमाडौं । नवल खड्काको निर्देशनमा तयार भएको नयाँ नेपाली चलचित्र ‘काँडेतार’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल र
आर्टिष्ट खबर/ माघ, काठमाडौं । जातीय विभेद र उन्मुलनको उपायलाई कलात्मक रुपमा अभिव्यक्त गर्ने २० लघु फिल्म प्रतियोगिताबाट छनौट
आर्टिष्ट खबर/ चैत, काठमाडौं । चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छिन्। कहिले आफ्नो व्यक्तिका का
आर्टिष्ट खबर/ असोज, काठमाडौं । अभिनेता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले पहिलो पटक सँगै काम गरेको चलचित्र
आर्टिष्ट खबर/ फागुन, काठमाडौं । फ्रेन्चाइज लिएर गतबर्ष नेपालमा सम्पन्न भएको ‘डान्सिङ विथ द स्टार नेपाल’को दोस्रो सिजन यसपटक भने नआउने भएको छ । सन् २००५ बाट अमेरिकाबाट सुरु भएको यो डान्सिङ रियालिटी शो नेपालका लागी निर्देश लक्ष्मण पौडेलको टिमले सुरु गर्नुभएको थियो । बिशेषगरी यो रियालिटी शोमा ल्याटिन फर्ममा डान्स गर्नुपर्ने नियम छ तर नेपालका लागी त्यो सम्भव नभएकाले पनि उक्त फ्रेन्चाइज छाड्नु परेको निर्देशक पौडेलले बताउनुभएको छ । यसअघि पहिलो सिजनका लागी भारतबाट अनुमति लिँदा ल्याटिन फर्मम....
आर्टिष्ट खबर/ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सिनेबृत यतिबेला नायक पल शाह प्रकरणले तातेको छ । चलचित्र क्षेत्रका लोकप्रिय नायक पलबिरुद्ध ए
गोपिकृष्ण चापागाईं/ कात्तिक, काठमाडौं । नायक शितल केसी डेढ दशकदेखि नेपाली चलचित्र जगतमा सकृय रुपमा लाग्नुभएको छ । नेगेटिभबाट खिचि
आर्टिष्ट खबर/ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो समय आफ्नो स्वरमार्फत दर्शक स्रोताको मन जित्न सफल गायिका हुनुहुन्छ विद्या तिवारी । विद
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बिषयमा सलमानले आफूलाई कसैको धम्की नआएको बताउनुभएको छ । धम्कीपूर
एजेन्सी साउथका सुपरस्टार प्रभासको नयाँ चलचित्र ‘आदिपुरुष’ आउनेक्रममा छन् । यो चलचित्रका लागी ५ सय करोडको बजेट राखिएको भन्ने खबरले
मुम्बई । बलिउडका प्रख्यात गायक कृष्णकुमार कुन्नथ (केके) को निधन भएको छ । कोलकातामा लाइभ कन्सर्ट गाइरहँदा हृदयघातका कारण ५३ वर्षको
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । तेश्रो संस्करणको नेपाल म्युजिक एण्ड फेशन अवार्ड २०२२ शुक्रबार बेलुका काठमाडौंमा सम्पन्न भएको
आर्टिष्ट खबर/ असार, काठमाडौं । मोडल साक्षी लम्सालको पछिपछि दिक्पाल कार्की र एसराज गरच घुमिरहेका छन् । दुबैले उत्तिकै माया गर्छन् ।
आर्टिष्ट खबर/ जेठ, काठमाडौं । निवेश श्रेष्ठको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘चुमी रहुँ’ बोलको गीतमा निवेशकै शब्द रहेक
आर्टिष्ट खबर/ भदौ, काठमाडौं । गएको शुक्रबार (भदौ १) बाट चार नेपाली चलचित्र एक साथ प्रदर्शनमा आए । जसमध्ये चलचित्र ‘ब्ल्याक’ पनि प
आर्टिष्ट खबर/ साउन, काठमाडौं । नायक सलोन बस्नेत निर्देशक तथा कलाकार सोभित बस्नेतका छोरा हुन् । सलोनले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र
Raksha Kumar Rai
Rashmi Tamang - Nepali Model
Binu Shakya - Belly Dancer
Belly Dancer Binu Shakya
No birthday for today!
No birthday for this week!
No birthday for this month!
Ak Short News : Puja Sharma & Aakash Shrestha
Interview with Puja Sharma & Aakash Shrestha
Interview with Keshu Pun Magar
Singer Khem Century's Song Report
'Longest Dance Marathon by pair on Guinness World
Pratikchya Khadka And Saroj Shah's
Rajesh Payal Rai Report
Saroj Moktan Boogie Woogie
Chi Musi Chi Movie Team
Ranik Pariyar -Help Report
Rameshraj Bhattarai and Samjhana Bhandari